Ukunqunywa kwe-C-peptide kushukela > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
Ekuhlolweni kwesifo sikashukela, kubalulekile ukunquma inani elikhuphukile loshukela egazini. Ngasikhathi sinye, igazi lithathwa emthanjeni ukuze lihlaziywe, futhi isampula yalo nayo yenziwa amahora amabili ngemuva kokulayishwa kweglucose. Ukuze kuhlukaniswe ubukhona bohlobo oluthembele i-insulin noma olungatheni i-insulin esigulini esinesifo sikashukela ngendlela yelebhu, kuhlolwa ukuhlolwa kwe-C-peptides. Ake sibheke izici eziphambili zokuhlolwa kwama-peptides anesifo sikashukela.
I-Cepteptide iyinkomba yezinga lokuqalwa kwe-insulin emzimbeni womuntu. Ingxenye yamaprotheni emolekyuli ye-protoinsulin. Kunokujwayelekile okuqinile kokuqukethwe kwaleli protein emzimbeni. Lapho i-glucose igxuma, iproinsulin idiliza i-insulin kanye ne-c-peptide uqobo. Le nto yenziwa ngamaseli we-pancreatic β-cell: le nqubo iyinkimbinkimbi impela.
Yize i-Cepteptide ingenawo umsebenzi wezinto eziphilayo futhi isimo sawo siphansi kakhulu, kodwa-ke, sibonisa izinga okwakhelwa ngalo i-insulin. Ukunquma inani lezinto kwenza sikwazi ukubona okuqukethwe i-insulin emzimbeni kushukela.
Lapho kwenziwa inhlolovo
Kuyadingeka ukuthola inani le-peptide yegazi C yokwenziwa kwemisebenzi enjalo yokuxilonga.
Ukuthola imbangela ye-hypoglycemia kuhlobo 1 noma uhlobo 2 sikashukela.
Ukunqunywa kwe-insulin egazini ngendlela engaqondile, uma isimo sakhona sidlulwa noma sincishisiwe.
Ukunqunywa komsebenzi wama-antibodies kuya ku-insulin, uma kungukuthi kujwayelekile ukusebenza kwawo.
Ukuhlonzwa kobukhona bezindawo ezinempilo zamanyikwe ngemuva kokuhlinzwa.
Ukuhlolwa komsebenzi we-beta cell ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo oluncike ku-insulin nolungena-insulin.
Izindlela ezichaziwe zivumela ukufezekisa incazelo ephelele yesifo sikashukela futhi kunikeze ukwelashwa uma kunesidingo.
Ukuxilongwa kwe-C-peptide kuyadingeka ezimweni ezinjalo:
ukuxilongwa okuhlukile kohlobo II noma isifo sikashukela sohlobo II,
ukuxilongwa kwe-hypoglycemia futhi, ikakhulukazi, izinsolo zokuncipha kokuncipha koshukela wegazi,
Ukukhetha indlela yokwelapha isifo sikashukela,
ukuhlola isimo se-pancreas, uma kunesidingo sokuphazamisa ukwelashwa kwe-insulin noma uma isimo sawo sihambelana nezinkomba,
ukulawula isimo somzimba wentsha engagcini ngokwejwayelekile isisindo
ukulawula ukukhiqizwa kwe-insulin ku-pathology yesibindi,
ukubheka isimo seziguli ngemuva kokususwa kwama-pancreas,
ngenhloso yokuhlola abesifazane abane-polycystic ovary syndrome.
Izinga le-peptide nokuhlukunyezwa
Imvelo yokuqukethwe kwalokhu ngaphambi kokudla ihluka ngokujwayelekile kusuka kumamilimitha angama-0.26 kuya kwangama-0,3 ilitha ngalinye, okuhambelana nenkomba yokulinganisa engu-0.78-1.89 μg / l. Ukuze uhlukanise phakathi kokukhushulwa okukhulayo kwe-insulin ekuphathweni kwayo kwangaphandle, isilinganiso sokuqukethwe kwe-hormone yamanyikwe kanye ne-peptide kubalwa.
Isimo senkomba enjalo singaphakathi kweyunithi elilodwa. Uma leli nani litholakala noma lingaphansi, lokhu kubonisa okuqukethwe okwengeziwe kwe-insulin okufaka igazi kusuka ngaphakathi. Kepha uma, ngemuva kokubala, kutholakala isibalo esidlula ubunye, lokhu kukhombisa ukuthi i-insulin ingeniswa emzimbeni womuntu.
Ukwanda kwe-c-peptide kuwuphawu lwezifo nemibandela enjalo:
ukufakelwa kwamaseli we-beta noma ama-pancreas ngokuvamile,
ukwethulwa kwezidakamizwa ezinciphisa ushukela zohlobo 2 lwesifo sikashukela ngomlomo,
ukwehluleka kwezinso okukhona phambi kwesifo sikashukela,
uma isisindo somzimba ungahlonishwa,
ukuthatha izidakamizwa ze-glucocorticoid isikhathi eside,
ukusetshenziswa kwesikhathi eside kwe-estrogen ngabesifazane,
thayipha isifo sikashukela esi-2 (noma esingeyona i-insulin).
Kodwa-ke, okujwayelekile emzimbeni wale proteni kukhombisa ukuthi ukukhiqizwa kwe-insulin kusaqhubeka. Lapho kulapho kusegazini, kungcono ukusebenza kwamanyikwe.
Kodwa-ke, ukunyuka kwegazi kwe-peptide kukhombisa ukwanda kwe-insulin. Lesi simo sibizwa nge- “hyperinsulinemia” futhi senzeka ezigabeni zokuqala zokukhula kwesifo sikashukela - ikakhulukazi sohlobo lwesibili.
Kuncike ekutheni i-peptide iphakeme, kepha ushukela ayikho, khona-ke lokhu kusho ukuthuthukiswa kokumelana ne-insulin noma i-prediabetes. Kulokhu, ukudla okune-carb ephansi kuzosiza ukulungisa ukubalwa kwegazi. Kulokhu, awukwazi ukwenza imijovo ye-insulin - umzimba ukwazi ukwenza kahle ngaphandle kwabo.
Uma zombili i-peptide noshukela ziphakanyisiwe egazini, khona-ke lokhu kuyisibonakaliso sesifo sikashukela sohlobo 2 esithuthukisiwe. Kulokhu, kuyadingeka ukubheka ukudla kanye nemithwalo kakhulu, ngokucophelela kakhulu. Ukudla okune-carb ephansi kusiza ekunciphiseni isimo futhi kuvimbele imijovo ye-insulin engapheli.
Okusho i-peptide esehlisiwe egazini
Ukwehla kwezinga le-peptide kwenzeka kulezi zimo nezifo ezilandelayo:
ukuphathwa kwe-insulin futhi, ngenxa yalokho, i-hypoglycemia yokufakelwa,
uhlobo lokuncika kwesifo sikashukela.
Uma nje i-C peptide esegazini iphansi, noshukela, kunalokho, kuphezulu, lokhu kukhombisa i-mellitus yesifo sikashukela sohlobo lwesibili noma isifo sikashukela sohlobo lokuqala. Kulokhu, isiguli sidinga imijovo ye-insulin. Khumbula ukuthi i-peptide iyancipha ngesikhathi sezimo ezicindezelayo futhi idakiwe.
Ngokuxineka okuphansi kwe-peptide esegazini nokuqukethwe ushukela omningi, kunengozi enkulu yokuthola izinkinga zesifo sikashukela:
ukulimala kwamehlo kwesifo sikashukela,
izilonda zemithambo yegazi nezinzwa zamaphethelo aphansi, okuholela ekugcineni ebulilini nasekuqunjweni,
ukulimala izinso nesibindi,
Ukuhlolwa kwegazi likashukela kwenziwa esiswini esingenalutho. Ngaphambi kokusampula kwegazi, ukuzila ukudla okungenani amahora ayisishiyagalombili kuyadingeka. Isikhathi esihle salokhu silungile ngemuva kokuvuka. Inqubo iyonke ayifani neyejwayelekile - igazi lithathwa emthanjeni liye kubhubhu lokuhlola elilungiselelwe.
Igazi ligijinywa nge-centrifuge ukuze lihlukanise i-serum kanye neqhwa. Ngokulandelayo, ukuhlolwa kwegazi kwenziwa ngaphansi kwesibonakhulu nge-microscope elabhorethri kusetshenziswa amakhemikhali amakhemikhali.
Kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi inani le-peptide livamile noma lihambelana nomkhawulo walo ophansi. Ezimweni ezinjalo, ukuxilongwa okuhlukile kwenziwa ngulolo okuthiwa lukhuthazo. Ukugqugquzela kwenziwa ngezindlela ezimbili:
umjovo we-glucagon (kwiziguli ezine-hypertension ye-arterial, inqubo ihlangene ngokuphelele),
ibhulakufesi ngaphambi kokuvuselelwa kabusha (ngoba lokhu kwanele ukusebenzisa ivolumu ye-carbohydrate engeqi "amayunithi wesinkwa").
Okuhle ukuhlaziya okuhlangene. Uma ngenxa yanoma yisiphi isizathu sezokwelapha kungenzeki ukwenqaba ukuphuza umuthi, khona-ke isimo kufanele sibhekwe ngokuningilizayo lapho kucutshungulwa. Imiphumela ivame ukuqedwa ngamahora amathathu.
Yini indlela engcono yokulungiselela ukuhlolwa kwe-peptide?
Khumbula ukuthi lokhu kuhlaziya kuyadingeka ukuze ufunde ukusebenza kwamanyikwe. Lokhu kusho ukuthi ekulungiseleleni ukuhlaziywa, zonke izindlela zokudla mayelana nokusebenza okujwayelekile kwalo mzimba kumele zibhekwe. Ngaphezu kwalokho, amalungiselelo wokuhlaziywa okunjalo afaka izinyathelo:
ukunqamula ngokuphelele ekudleni okungenani amahora ayisishiyagalombili,
uvunyelwe ukuphuza amanzi, vele, ngaphandle koshukela,
yenqaba ukuphuza utshwala,
ungasebenzisi noma yimuphi umuthi ngaphandle kwalowo ongeke wasatshalaliswa,
khipha noma yikuphi ukulayisha ngokweqile ngokomzimba nangokomzwelo,
ungabhemi amahora amathathu ngaphambi kwalokhu kuhlaziywa.
Amathemba okusetshenziswa kweprotheni ekwelapheni isifo sikashukela
Eminye imininingwane yezokwelapha iphakamisa ukuthi ukuphathwa ngokufana kwe-peptide ne-insulin ezigulini ezinesifo sikashukela esihambisana nesifo sikashukela kungazigwema ezinye zezinkinga zesifo sikashukela, ezinjengesifo sikashukela nephropathy, i-neuropathy ne-angiopathy.
Kufakazelwa ukuthi ngenkathi umuntu enamanani amancane aleli protein kulelo gazi, lokhu kunciphisa ubungozi bokushintshwa kwesifo sikashukela esingaxhomekeki kwi-insulin kuye kokuncika kwe-insulin. Kungenzeka ukuthi ngokuzayo isiguli sizothola imijovo ye-c-peptide ukusiza ukuqeda isifo esiyingozi.
Izifundo eziningi zezokwelapha ziphikisana ngokungananazi ukuthi ukudla okune-carb ephansi okuqukethe i-carbohydrate okungadluli amayunithi wesinkwa ayi-2,5 kunciphisa kakhulu isidingo somzimba sezidakamizwa ezinciphisa ushukela kanye ne-insulin yesifo sikashukela esincike ku-insulin. Lokhu kusho ukuthi noma onesifo sikashukela sohlobo 1, ungagcina ulawula futhi uphathe kuphela imithamo yesondlo ye-insulin.
Ngakho-ke, i-c-peptide yiprotheni ebalulekile ekhombisa isimo se-pancreas kanye nengozi yokuthola ubunzima besifo sikashukela.
Izinkomba zokuhlaziywa kwe-C-peptide
Uchwepheshe uyalela ukuhlaziya kuma-c-peptides ukuthola ukuthi:
uhlobo lwesifo sikashukela esigulini esithile,
izindlela zokwelapha i-pathology,
isimo lapho ukucabanga kwe-glucose kungaphansi kwesejwayelekile,
ukuba khona kwe-insulinomas,
isimo se-pancreas kanye nesimo esivamile sesiguli ngokumelene nesizinda sesifo,
imininingwane yokukhiqizwa kwama-hormone ekulimaleni kwesibindi.
Ngaphezu kwalawa macala, kudingeka ucwaningo ukuze kutholakale isimo sowesifazane onesifo se-ovary polycystic kanye nentsha eyeqile kweshukela onesifo sikashukela.
Kunemithetho ethile yokunikela ngegazi ku-c-peptide. Ngaphambi kokudlula kokuhlaziywa, kunconywa ukunamathela ekudleni okufanele (gwema okunamafutha, okumnandi, ufulawa).
Ngaphezu kwalokho, izinyathelo ezilandelayo kumele zibhekwe:
phuza iziphuzo ezingenawo ushukela (mhlawumbe amanzi ahlanzekile ngaphandle kwegesi),
kwenqatshelwe ngokuphelele ukuphuza utshwala nokubhema ugwayi ngaphambi kosuku lokufunda,
ungathathi imishanguzo (uma ukwenqaba akunakwenzeka, udinga ukubhala inothi kwifomu yokudlulisela),
yenqaba ukucindezelwa ngokomzimba nangokwengqondo.
Igazi lithathwa esiswini esingenalutho, ngakho-ke isidlo sokugcina kufanele okungenani sibe ngamahora ayisishiyagalombili ngaphambi kokuhlolwa,
Njengoba sekushiwo, ukuhlolwa kwe-c-peptide kunikezwa esiswini esingenalutho, ngakho-ke kungcono ukunikela ngegazi ngemuva kokuvuka ngaphambi kokudla kwasekuseni. I-Biomaterial ithathwa njengenqubo ejwayelekile: ngemuva kokubhoboza, igazi lithathwa emthanjeni lihanjiswe nge-tube eyinyumba (kwezinye izimo, kuthathwa ishubhu le-gel).
Uma i-hematoma ihlala ngemuva kokuthola i-venipuncture, udokotela angancoma i-compress efudumele. I-biomaterial ephumela lapho izohanjiswa nge-centrifuge. Ngakho-ke, i-serum ihlukaniswe, egcinwa emazingeni okushisa aphansi, kamuva ihlolwe ngaphansi kwesibonakhulu usebenzisa ama-reagents ahlukahlukene.
Kwesinye isikhathi igazi elisheshayo libonisa imiphumela ejwayelekile. Ngomzuzu onjalo, udokotela akakwazi ukuthola ukuthi unembile yini, ngakho-ke unikeza isivivinyo esingeziwe. Kulolu cwaningo, kuvunyelwe ukudla amayunithi ama-2-3 esinkwa ngaphambi kwenqubo noma usebenzise imijovo ye-insulin antagonist (kufanele kubhekwe ukuthi le mijovo iphikisiwe uma kwenzeka kunomfutho wegazi ophakeme). Kuhle ukwenza ukucubungula okungu-2 ngasikhathi sinye (ukuzila ukudla nokukhuthaza) ukuthola isithombe esiphelele sesimo sesiguli.
Ngemuva kokuthi igazi seliqoqiwe, imiphumela yocwaningo ingatholwa ngemuva kwamahora ama-3. I-Serum ekhishwe egazini kufanele igcinwe ekushiseni kwama-degrees angu-20 izinyanga ezingekho ngaphezulu kwe-3.
Izinguquko ezingeni le-c-peptide zihambelana nenani le-insulin egazini. Udokotela uhlanganisa imiphumela nokujwayelekile. Imvamisa, esiswini esingenalutho, ukuqina kwe-peptide kufanele kusuke ku-0.78 kuya ku-1.89 ng / ml (ohlelweni lwe-SI - 0.26-0.63 mm / l). Lezi zinkomba azithintwa yiminyaka nobudala bomuntu. Uma isilinganiso se-insulin ukuya ku-c-peptide singu-1 noma ngaphansi, lokhu kusho ukwanda kokuqalwa kwe-insulin. Uma kungaphezu kwe-1 - kunesidingo se-insulin eyengeziwe.
Uma okuqukethwe kwe-c-peptides kungaphezu kokujwayelekile, kuyadingeka ukuthola imbangela yalesi simo.
Izinga le-peptide eliphakeme lingabonisa izimo eziningi zesiguli:
ukuthunyelwa kwama-pancreas namaseli alo we-beta,
ukwethulwa kwezidakamizwa ze-hypoglycemic,
ukusetshenziswa kwesikhathi eside kwama-glucocorticoids noma ama-estrogens kwabesifazane,
ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela sohlobo 2.
Esigabeni sokuqala sokukhula kwesifo sikashukela sohlobo 2, i-hyperinsulinemia iyenzeka, okubuye kuboniswe ngokwanda kwezinga le-peptide. Lapho amaprotheni enyuka, futhi izinga likashukela lihlala likhona, ukumelana ne-insulin noma ifomu eliphakathi nendawo (prediabetes) kwenzeka. Kulokhu, isiguli sisebenzisa ngemithi, sibhekane nalesi sifo ngosizo lokudla okukhethekile kanye nokuzivocavoca umzimba.
Uma i-insulin ikhuphuka ngama-peptides, uhlobo 2 sikashukela luyakhula. Esimweni esinjalo, kuyadingeka ukulandela ngokuqinile zonke izincomo zikadokotela ukuvimbela ukwelashwa kwe-insulin.
Amanani ancishisiwe abonwa ngohlobo 1 sikashukela, i-hypoglycemia yokufakelwa, noma ukuhlinzwa okukhulu kwe-pancreatic.
Kunezimo lapho i-c-peptide esegazini yehliswa futhi okuqukethwe kweglucose kukhuphuka, lokhu kubonisa uhlobo olunzima lohlobo 2 sikashukela noma isifo sikashukela esincike ku-insulin. Kulokhu, isiguli sidinga imijovo yama-hormone, njengoba izinkinga (ukulimala kwamehlo, izinso, isikhumba, imithambo yegazi) kungaba nesifo sikashukela i-mellitus.
Izinga le-peptide lehla hhayi ngesikhathi sokushintsha emzimbeni kuphela, kepha futhi nokusebenzisa utshwala kanye nokucindezela okukhulu ngokomzwelo.
Ama-peptides esifo sikashukela
Ukwelashwa kwesifo sikashukela kuhloswe ngakho ukugcina isimo esijwayelekile kanye nokunciphisa izimpawu zesifo. Ukuthuthukisa ikhwalithi yempilo, namuhla, kanye nemithi yendabuko, ama-peptide bioregulators asetshenziswa. Benza ngcono ukusebenza kwamanyikwe.
Ama-peptides ayizakhi ezihlelekile zeprotheni ehlanganisa ukwakheka kwazo. Ngenxa yalokhu, ukulawulwa kwezinqubo ze-biochemical kumaseli kuyenzeka, izicubu ngokuphelele namaseli alimele ayavuselelwa. Ama-peptide bioregulators enza ukuthi umzimba usebenzise ama-pancreas, asize ukukhiqiza awabo ama-insulin. Kancane kancane, i-iron iqala ukusebenza ngokujwayelekile, isidingo samanye ama-hormone anyamalale.
Umuthi wanamuhla unikeza izidakamizwa ezisuselwa kuma-peptides (Superfort, Visolutoen). Enye yezinto ezidumile yi-biopeptide agent Victoza. Isakhi esiyinhloko i-analogue ye-peptide 1 ekhiqizwa emzimbeni womuntu. Iningi leziguli linikeza izibuyekezo ezinhle ngomuthi uma zisetshenziswa ngokubambisana nokwelashwa ngokomzimba kanye nokudla okukhethekile. Imiphumela emibi lapho uthatha iVictoza ibingajwayelekile.
Ngakho-ke, ukuhlaziywa kwe-c-peptide kusiza ukwembula isithombe sonke sezifo zeziguli ezihambisana nesifo sikashukela i-mellitus. Imiphumela yenza kube nokwenzeka ukuthola ukuthi kusebenza kahle kangakanani ama-pancreas nokuthi ngabe kukhona ubungozi bezinkinga zesifo sikashukela. Kukholelwa ukuthi ngokuzayo, ngaphezu komjovo we-insulin, kuzosetshenziswa imijovo ye-c-peptide.
Isayensi yezokwelapha inikeza lencazelo elandelayo:
Ukuxilongwa kwesifo sikashukela i-mellitus kanye nomehluko wohlobo I kanye nohlobo II lwesifo sikashukela,
Ukuxilongwa kwe-insulinoma (isimila esibi noma sokulimala kwamanyikwe),
Ukuhlonza izinsalela zezicubu ze-pancreatic ezikhona ngemuva kokukhishwa kwazo (ngomdlavuza wesitho),
Ukuxilongwa kwesifo sesibindi
Ukuxilongwa kwe-ovary polycystic,
Ukuhlolwa kwamazinga we-insulin ezifweni zesibindi,
Ukuhlolwa kokwelashwa kwesifo sikashukela.
I-C-peptide yenziwe kanjani emzimbeni? I-Proinsulin, ekhiqizwa kuma-pancreas (ngokuqondile, kuma-isheyuli we-β-amaseli we-pancreatic is,), iketanga elikhulu le-polypeptide eliqukethe izinsalela ezingama-84 amino acid. Kuleli fomu, umuthi uncishiswa umsebenzi wamahomoni.
Ukuguqulwa kwama-proinsulin angasebenzi ku-insulin kwenzeka ngenxa yokuhamba kwe-proinsulin kusuka kuma-ribosomes ngaphakathi kwamangqamuzana kuya ezigungwini eziyimfihlo ngendlela yokubola okuyingxenye kwe-molecule. Ngasikhathi sinye, izinsalela ezingama-33 ze-amino acid, ezaziwa ngokuthi yi-peptide yokuxhuma noma i-C-peptide, zikhonkothwe zisuka komunye umkhawulo weteyini.
Kungani ngidinga ukuhlolwa kwe-C-peptide?
Ukuqonda okucacile kwesihloko, udinga ukuqonda ukuthi kungani ezivivinyweni zaselebhu zenziwa ku-C-peptide, hhayi kwi-insulin yangempela.
Ukuphila kwesigamu se-peptide esegazini kusekude kunokwe-insulin, ngakho-ke inkomba yokuqala izoqina kakhudlwana,
Ukuhlaziywa kwe-immunological ye-C-peptide kukuvumela ukukala ukukhiqizwa kwe-insulin ngisho nangasemuva kokubakhona kwe-hormone yezidakamizwa zokwenziwa esegazini (ngokwemibandela yezokwelapha - i-C-peptide ayenzi "ukuwela" nge-insulin),
Ukuhlaziywa kwe-C-peptide kunikeza ukuhlolwa okwanele kwamazinga e-insulin noma kukhona ama-autoimmune antibodies emzimbeni, okwenzeka ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-I.
Yini i-touchi? Uyini imfihlo yesenzo sakhe esiyisimangaliso? Funda kabanzi kule ndatshana.
Yiziphi izigaba zemithi (hypoglycemic drug (amaphilisi)) ezisetshenziswa ekwelapheni isifo sikashukela?
Ngokudlanga kwesifo sikashukela i-mellitus (ikakhulukazi uhlobo I), okuqukethwe kwe-C-peptide esegazini kuphansi: lokhu kuwubufakazi obuqondile bokuntuleka kwe-insulin (yangaphakathi) ye-insulin. Ukutadisha kokuhlushwa kwe-peptide yokuxhuma kuvumela ukuhlolwa kwe-insulin secretion ezimweni ezahlukene zokwelashwa.
Yiziphi izinkomba zokuhlaziywa kwe-C-peptides
Ukushintshashintsha kwezinga le-C-peptide ku-serum kufana namandla we-insulin egazini. Okuqukethwe kwe-peptide yokuzila kusukela ku-0.78 kuya ku-1.89 ng / ml (ohlelweni lwe-SI, 0.26-0.63 mmol / l).
Ngokuxilongwa kwe-insulinoma nokuhlukahlukana kwayo kusuka ku-hypoglycemia yamanga (eyiqiniso), isilinganiso se-C-peptide esilinganisweni se-insulin sinqunywa.
Uma isilinganiso silingana nokukodwa noma ngaphansi kwaleli nani, lokhu kubonisa ukwanda okwandisiwe kwe-insulin yangaphakathi. Uma izinkomba zinkulu kune-1, lokhu kuwubufakazi bokwethulwa kwe-insulin yangaphandle.
Isifo sayo i-Itsenko-Cushing's (isifo se-neuroendocrine esidalwa yi-adrenal hyperfunction),
Isifo sesibindi (i-cirrhosis, i-hepatitis),
Ukusetshenziswa kwesikhathi eside kwama-estrogens, ama-glucocorticoids, nezinye izidakamizwa ze-hormonal.
Izinga eliphakeme le-C-peptide (futhi, ngakho-ke, i-insulin) lingakhombisa ukwethulwa kwama-glucose ejensi okwehlisa izicubu. Kungaba futhi kube yimiphumela yokufakelwa kwamanyikwe noma ukufakelwa kwe-beta cell.
Isikhundla se-Aspartame - kufanelekile ukusebenzisa i-aspartame esikhundleni sikashukela? Yiziphi izinzuzo nokubi? Funda kabanzi lapha.
Cataract njengendlela complication sikashukela? Izimbangela, izimpawu, ukwelashwa.